IMDB 7.1 အထိ ရထားတဲ့ Godzilla: King of Monsters ကြည့်ရတာ တန်တဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားလား? – For her myanmar
IMDB 7.1 အထိ ရထားတဲ့ Godzilla: King of Monsters ကြည့်ရတာ တန်တဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားလား?
Posted on May 31, 2019 Author Aye Mon Kyaw	Comment(0)
ယောင်းတို့ရော.. ကြည့်ပြီးကြပြီလား? ဘယ်လို ခံစားရလဲ?
ယောင်းက ဒဏ္ဍာရီလာ သတ္တဝါကြီးတွေ၊ ကမ္ဘာဦးတုန်းကရှိခဲ့တဲ့ ဧရာမ သတ္တဝါကြီးကို စိတ်ဝင်စားသူတစ်ယောက်လား?? ဒါဆိုရင်တော့ IMDB Ratingမှာ 7.1အထိ ရထားတဲ့ Godzilla: King of Monsters ကို ကြည့်ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ…
ရုပ်ရှင်အမျိုးအစားကတော့ Science-fiction နဲ့ Fantasy ကို ပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်ပြီး ၂၀၁၄ တုန်းက ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Godzilla ရဲ့ အဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၄ တုန်းက Godzilla ကတော့ IMDB 6.4 ပဲ ရခဲ့ပေမဲ့ ဒီ၂၀၁၉ ရုပ်ရှင်ကတော့ 7.1 ထိ ရထားတာမို့ ဘာတွေများကောင်းနေလို့လဲ ဆိုပြီး စပ်စုချင်တာမို့ အက်ဒ်မင်တစ်ယောက် သွားကြည့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ယောင်းတို့ရေ…
Related Article >>> Comedyနဲ့ Drama အရသာကို အပြည့်အဝ ခံစားရစေမယ့် Friendzone ရုပ်ရှင်
ကမ္ဘာကြီးကို တချိန်က ကြီးစိုးခဲ့တဲ့ Titans တွေဟာ ကမ္ဘာမြေပေါ်ကို နောက်တစ်ဖန်ပြန်ရောက်လာဖို့ အကြောင်းဖန်လာပါတယ်။ အဓိက သတ္တဝါတွေကတော့ King of Monsters လို့ ခေါ်တဲ့ Godzilla၊ King Ghidora လို့ ခေါ်တဲ့ ခေါင်းသုံးလုံး မီးနဂါး၊ Rodan လို့ ခေါ်တဲ့ မီးနတ်ဆိုး၊ Queen of Monsters လို့ခေါ်တဲ့ လိပ်ပြာပုံစံ Mothra တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တခြား Titans တွေဟာလည်း ကမ္ဘာပေါ်က တိုက်ကြီး အသီးသီးမှာ ရှိနေပြီး မပေါက်ကွဲသေးတဲ့ မီးတောင်ရှင် တစ်ခုလို အိပ်ပျော်နေတာမို့ အချိန်မရွေး နိုးထလာနိုင်ပါတယ်။ ဒီ Titansတွေကို အမေရိကန်အစိုးရက အန္တရာယ်များလို့ သတ်ပစ်ချင်ပေမဲ့ Monarchအမည်ရှိတဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့ကတော့ ဒီကောင်ကြီးတွေကို သတ်ဖို့ သဘောမတူဘဲ လေ့လာဖို့ လှောင်ပိတ်ပြီး မွေးမြူထားခဲ့ကြပါတယ်။
သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ ဒီသတ္တဝါတွေဟာ ကမ္ဘာကြီးကို ကောင်းကျိုးပြုလိမ့်မယ်လို့ ယူဆမိခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သိပ္ပံပညာရှင် အမျိုးသမီး Emma ဟာ Titansတွေနဲ့ လူတွေ အတူ နေထိုင်နိုင်တယ်လို့ ယူဆသူတစ်ယောက်ပါ။ Emma ရဲ့ သားလေးဟာ ၂၀၁၄ တုန်းက Titansတွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုမှာ သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သားဖြစ်သူရဲ့သေဆုံးမှုကို အချည်းနှီး မဖြစ်အောင် Titansတွေနဲ့ ပက်သတ်တဲ့ သူမ သုတေသနကို အဆုံးထိ ဆက်လုပ်မယ်လို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်။
သူမဟာ Titans တွေကို ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့၊ နာခံအောင်/ တွန်းလှန်အောင် ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ Orca ကို သူမရဲ့ ခင်ပွန်းဟောင်း Mark နဲ့ ပေါင်းပြီး တီထွင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ Orca ဟာ Titansတွေသာ ကြားနိုင်တဲ့ Alpha Frequency (အယ်လ်ဖာကြိမ်နှုန်းတွေ) ကို လွှင့်ထုတ်တဲ့ စက်ပါ။
ဒီစက်ဟာ မသမာသူတွေ လက်ထဲရောက်သွားတဲ့အခါ သန်းနဲ့ချီတဲ့ လူသားတွေကို ပျက်ဆီးစေဖို့ အကြောင်းဖန်လာခဲ့ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ စိတ်ရူးပေါက်နေတဲ့ ထောက်လှမ်းရေးဟောင်း Jonahက Emma နဲ့ သူမရဲ့ သမီးဖြစ်သူ Madison ကို သူတို့ရဲ့ စက် Orcaနဲ့ အတူ ပြန်ပေးဆွဲခဲ့လို့ပါပဲ။
Jonah ကတော့ ယူဆချက်ကတော့ ကမ္ဘာကြီးကို လူသားတွေက အလွန်အကျွံဖျက်ဆီးနေတာမို့ Titansတွေကို ပြန်ခေါ်ပြီး လူဦးရေလျှော့ချလိုက်မှ ကမ္ဘာကြီးက အရင်လို စိမ်းစိမ်းစိုစိုနဲ့ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းပြန်ဖြစ်သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Emma က လည်း လူသားမျိုးနွယ်နဲ့ Titansတွေ အတူနေနိုင်တယ်လို့ ယူဆလို့ သူမကိုယ်တိုင် Jonah ဘက်ကနေ ပါခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် Emma ဟာ Jonahရဲ့ အမိန့်အတိုင်း Monster Zero လို့ သူတို့ နာမည်ပေးထားတဲ့ Titan( King Ghidora) နဲ့ Godzilla ကို အန္တာတိကတိုက်ရဲ့ ရေခဲတွေထဲ ပိတ်ထားတာကနေ နိုးထလာအောင် လုပ်လိုက်ပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာလည်း Mexico ကို ဆက်သွားပြီး အိပ်ပျော်နေတဲ့ Rodan ဆိုတဲ့ အကောင်ကြီးကိုလည်း နိုးထလာအောင် လုပ်လိုက်ပါတယ်။
သူတို့မသိလိုက်တာက King Ghidora ဟာ လူသားမျိုးနွယ်နဲ့ သဘာဝကြား မျှတအောင် လုပ်ပေးမှာ မဟုတ်ဘဲ လူသားမျိုးနွယ်ကို မျိုးတုံးသွားစေမယ့် အကောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပါပဲ။ သိလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ အတော်နောက်ကျသွားခဲ့ပါပြီ။ King Ghidora ရဲ့ ဟိန်းသံတချက်နဲ့တင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက မဟာပထဝီမြေကြီးထဲ အိပ်ပျော်နေတဲ့ Titansတွေ အားလုံး နိုးထလာကာ မြို့တွေကို စတင်ဖျက်ဆီးပါတော့တယ်။
Titansတွေ အားလုံး နိုးထလာတဲ့အခါမှာတော့ ကမ္ဘာကို အုပ်စိုးဖို့ ကြိုးစားလာခဲ့ပါတယ်။ သေချာတာ တစ်ခုကတော့ လူသားတွေအနေနဲ့ Titansတွေရဲ့ တိုက်ပွဲမှာ ကိုယ်တိုင်ဝင်မတိုက်နိုင်ပါဘူး။
ဒါကြောင့် Titansတွေရဲ့ အန္တရာယ်ကို လူသားတွေက ရပ်ကော ရပ်တန့်နိုင်ပါ့မလား?
လူတွေအားလုံး မျိုးသုဉ်းသွားမှာလား ရှင်ကျန်ခဲ့မှာလား?
လူတွေနဲ့ အတူနေနိုင်တဲ့ Titansတွေ က အနိုင်ရသွားမှာလား?
လူတွေကို မျိုးတုန်းအောင်လုပ်မယ့် Titansတွေက အနိင်ရသွားမှာလားဆိုတာကိုတော့ ပိတ်ကားထက်မှာ ကြည့်ရှုပါလို့……
အက်ဒ်မင်အားအရဆုံးကတော့ monsters characterတွေ ကို အသားပေးထားတာပါပဲ။ ကိုယ်က human character တွေကို သိပ်မကြိုက်တဲ့သူမို့လား မသိ။ ၂၀၁၄ Godzilla ရုပ်ရှင်တုန်းက human drama များပြီး monster characterနည်းတယ်လို့ ဝေဖန်ခံရတာကြောင့် ၂၀၁၉မှာတော့ ပြင်ဆင်ခဲ့ဟန် တူပါတယ်။ ဒါရိုက်တာပြောင်းသွားတာလည်း ပါမှာပေါ့။
ဒါကြောင့် ဒီရုပ်ရှင်မှာတော့ Monstersတွေ အများကြီးကို visual effects ကောင်းကောင်းနဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းအောင် သေချာရိုက်ကူးထားပါတယ်။
အရင် Godzilla ကားတွေထက် ပိုပြီး အသက်ဝင်တဲ့၊ ကြမ်းကြုတ် ရက်စက်တဲ့ monsters တွေကို ရင်တမမနဲ့ ကြည့်နေရမှာပါ။ ဒီကားမှာ human characterတွေ၊ သူတို့ကြားက drama နဲ့ ဇာတ်အိမ်ပိုင်းကိုတော့ ခပ်ပေါ့ပေါ့ ဖော်ပြထားတာလေးပဲ ပြောစရာရှိပါတယ်။ human drama နည်းတယ်ဆိုပေမဲ့ Titanတွေ အချင်းချင်း ကြားက Drama၊ Titansတွေနဲ့ သူတို့ကို သံယောဇဉ်ကြီးတဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေကြားက drama ကတော့ မနည်းပါဘူး။
နောက်တစ်ခုက သုံးထားတဲ့ technology နဲ့ ဇာတ်ဝင်တေးတွေပါ။ ဟင်ခနဲ ဟာခနဲ ဖြစ်သွားစေတဲ့အထိ အရမ်းမိုက်တဲ့ underwater scenesတွေပါ ပါတယ်။
ကျောရိုးခိုင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းမို့ ရုပ်ရှင်အရည်အသွေးကတော့ အစကနေ အဆုံးအထိ တစ်စက်မှ လျော့သွားခြင်း မရှိပါဘူး။ သမားရိုးကျ သာမန်တိုက်ပွဲတစ်ခု မဟုတ်ဘဲ ကမ္ဘာပေါ်က လူသန်းပေါင်းများစွာရဲ့ အသက်ကို လောင်းကြေးထပ်ထားတဲ့ တိုက်ပွဲတစ်ခုမို့ အားမလို အားမရ ဖြစ်မှုနဲ့ အတူ အနိုင် အရှုံး ရလဒ်တွေကို တချိန်လုံး ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ကြည့်နေရမှာပါ။ ကြည့်ဖူးသမျှ Godzilla ကား တွေထဲ ဒီတစ်ခုက ရင်အခုန်ရဆုံးပါပဲ။ ဘာတွေကို ရင်ခုန်ရလဲ ဆက်ပြောပြရင် spoil မိ မှာစိုးလို့ မပြောတော့ဘူး 😁
ဒါကြောင့် Monsters တွေကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ ယောင်းတို့အတွက်ဆိုရင်တော့ Godzilla: King of the monsters ဟာ အချိန်ပေးလိုက်ရတာ တန်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကောင်း တစ်ခု ဖြစ်မှာပါလို့…
ယောငျးတို့ရော.. ကွညျ့ပွီးကွပွီလား? ဘယျလို ခံစားရလဲ?
ယောငျးက ဒဏ်ဍာရီလာ သတ်တဝါကွီးတှေ၊ ကမ်ဘာဦးတုနျးကရှိခဲ့တဲ့ ဧရာမ သတ်တဝါကွီးကို စိတျဝငျစားသူတဈယောကျလား?? ဒါဆိုရငျတော့ IMDB Ratingမှာ 7.1အထိ ရထားတဲ့ Godzilla: King of Monsters ကို ကွညျ့ကွညျ့ဖို့ တိုကျတှနျးပါရစေ…
ရုပျရှငျအမြိုးအစားကတော့ Science-fiction နဲ့ Fantasy ကို ပေါငျးစပျထားတာဖွဈပွီး ၂၀၁၄ တုနျးက ထှကျရှိခဲ့တဲ့ Godzilla ရဲ့ အဆကျဖွဈပါတယျ။ ၂၀၁၄ တုနျးက Godzilla ကတော့ IMDB 6.4 ပဲ ရခဲ့ပမေဲ့ ဒီ၂၀၁၉ ရုပျရှငျကတော့ 7.1 ထိ ရထားတာမို့ ဘာတှမြေားကောငျးနလေို့လဲ ဆိုပွီး စပျစုခငျြတာမို့ အကျဒျမငျတဈယောကျ သှားကွညျ့ဖွဈခဲ့ပါတယျ ယောငျးတို့ရေ…
Related Article >>> Comedyနဲ့ Drama အရသာကို အပွညျ့အဝ ခံစားရစမေယျ့ Friendzone ရုပျရှငျ
ကမ်ဘာကွီးကို တခြိနျက ကွီးစိုးခဲ့တဲ့ Titans တှဟော ကမ်ဘာမွပေျေါကို နောကျတဈဖနျပွနျရောကျလာဖို့ အကွောငျးဖနျလာပါတယျ။ အဓိက သတ်တဝါတှကေတော့ King of Monsters လို့ ချေါတဲ့ Godzilla၊ King Ghidora လို့ ချေါတဲ့ ခေါငျးသုံးလုံး မီးနဂါး၊ Rodan လို့ ချေါတဲ့ မီးနတျဆိုး၊ Queen of Monsters လို့ချေါတဲ့ လိပျပွာပုံစံ Mothra တို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
တခွား Titans တှဟောလညျး ကမ်ဘာပျေါက တိုကျကွီး အသီးသီးမှာ ရှိနပွေီး မပေါကျကှဲသေးတဲ့ မီးတောငျရှငျ တဈခုလို အိပျပြျောနတောမို့ အခြိနျမရှေး နိုးထလာနိုငျပါတယျ။ ဒီ Titansတှကေို အမရေိကနျအစိုးရက အန်တရာယျမြားလို့ သတျပဈခငျြပမေဲ့ Monarchအမညျရှိတဲ့ သိပ်ပံပညာရှငျအဖှဲ့ကတော့ ဒီကောငျကွီးတှကေို သတျဖို့ သဘောမတူဘဲ လလေ့ာဖို့ လှောငျပိတျပွီး မှေးမွူထားခဲ့ကွပါတယျ။
သိပ်ပံပညာရှငျတှကေတော့ ဒီသတ်တဝါတှဟော ကမ်ဘာကွီးကို ကောငျးကြိုးပွုလိမျ့မယျလို့ ယူဆမိခဲ့ပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ သိပ်ပံပညာရှငျ အမြိုးသမီး Emma ဟာ Titansတှနေဲ့ လူတှေ အတူ နထေိုငျနိုငျတယျလို့ ယူဆသူတဈယောကျပါ။ Emma ရဲ့ သားလေးဟာ ၂၀၁၄ တုနျးက Titansတှရေဲ့ တိုကျခိုကျမှုမှာ သဆေုံးသှားခဲ့ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သားဖွဈသူရဲ့သဆေုံးမှုကို အခညျြးနှီး မဖွဈအောငျ Titansတှနေဲ့ ပကျသတျတဲ့ သူမ သုတသေနကို အဆုံးထိ ဆကျလုပျမယျလို့ စိတျပိုငျးဖွတျထားခဲ့ပါတယျ။
သူမဟာ Titans တှကေို ဆကျသှယျနိုငျတဲ့၊ နာခံအောငျ/ တှနျးလှနျအောငျ ထိနျးခြုပျနိုငျတဲ့ Orca ကို သူမရဲ့ ခငျပှနျးဟောငျး Mark နဲ့ ပေါငျးပွီး တီထှငျခဲ့သူ ဖွဈပါတယျ။ Orca ဟာ Titansတှသော ကွားနိုငျတဲ့ Alpha Frequency (အယျလျဖာကွိမျနှုနျးတှေ) ကို လှငျ့ထုတျတဲ့ စကျပါ။
ဒီစကျဟာ မသမာသူတှေ လကျထဲရောကျသှားတဲ့အခါ သနျးနဲ့ခြီတဲ့ လူသားတှကေို ပကျြဆီးစဖေို့ အကွောငျးဖနျလာခဲ့ပါတယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ စိတျရူးပေါကျနတေဲ့ ထောကျလှမျးရေးဟောငျး Jonahက Emma နဲ့ သူမရဲ့ သမီးဖွဈသူ Madison ကို သူတို့ရဲ့ စကျ Orcaနဲ့ အတူ ပွနျပေးဆှဲခဲ့လို့ပါပဲ။
Jonah ကတော့ ယူဆခကျြကတော့ ကမ်ဘာကွီးကို လူသားတှကေ အလှနျအကြှံဖကျြဆီးနတောမို့ Titansတှကေို ပွနျချေါပွီး လူဦးရလြှေော့ခလြိုကျမှ ကမ်ဘာကွီးက အရငျလို စိမျးစိမျးစိုစိုနဲ့ ငွိမျးငွိမျးခမျြးခမျြးပွနျဖွဈသှားမယျလို့ ဆိုပါတယျ။ Emma က လညျး လူသားမြိုးနှယျနဲ့ Titansတှေ အတူနနေိုငျတယျလို့ ယူဆလို့ သူမကိုယျတိုငျ Jonah ဘကျကနေ ပါခဲ့ပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ Emma ဟာ Jonahရဲ့ အမိနျ့အတိုငျး Monster Zero လို့ သူတို့ နာမညျပေးထားတဲ့ Titan( King Ghidora) နဲ့ Godzilla ကို အန်တာတိကတိုကျရဲ့ ရခေဲတှထေဲ ပိတျထားတာကနေ နိုးထလာအောငျ လုပျလိုကျပါတယျ။ တခြိနျတညျးမှာလညျး Mexico ကို ဆကျသှားပွီး အိပျပြျောနတေဲ့ Rodan ဆိုတဲ့ အကောငျကွီးကိုလညျး နိုးထလာအောငျ လုပျလိုကျပါတယျ။
သူတို့မသိလိုကျတာက King Ghidora ဟာ လူသားမြိုးနှယျနဲ့ သဘာဝကွား မြှတအောငျ လုပျပေးမှာ မဟုတျဘဲ လူသားမြိုးနှယျကို မြိုးတုံးသှားစမေယျ့ အကောငျဖွဈနတေယျဆိုတာပါပဲ။ သိလိုကျတဲ့အခါမှာတော့ အတျောနောကျကသြှားခဲ့ပါပွီ။ King Ghidora ရဲ့ ဟိနျးသံတခကျြနဲ့တငျ ကမ်ဘာတဈဝှမျးက မဟာပထဝီမွကွေီးထဲ အိပျပြျောနတေဲ့ Titansတှေ အားလုံး နိုးထလာကာ မွို့တှကေို စတငျဖကျြဆီးပါတော့တယျ။
Titansတှေ အားလုံး နိုးထလာတဲ့အခါမှာတော့ ကမ်ဘာကို အုပျစိုးဖို့ ကွိုးစားလာခဲ့ပါတယျ။ သခြောတာ တဈခုကတော့ လူသားတှအေနနေဲ့ Titansတှရေဲ့ တိုကျပှဲမှာ ကိုယျတိုငျဝငျမတိုကျနိုငျပါဘူး။
ဒါကွောငျ့ Titansတှရေဲ့ အန်တရာယျကို လူသားတှကေ ရပျကော ရပျတနျ့နိုငျပါ့မလား?
လူတှအေားလုံး မြိုးသုဉျးသှားမှာလား ရှငျကနျြခဲ့မှာလား?
လူတှနေဲ့ အတူနနေိုငျတဲ့ Titansတှေ က အနိုငျရသှားမှာလား?
လူတှကေို မြိုးတုနျးအောငျလုပျမယျ့ Titansတှကေ အနိငျရသှားမှာလားဆိုတာကိုတော့ ပိတျကားထကျမှာ ကွညျ့ရှုပါလို့……
အကျဒျမငျအားအရဆုံးကတော့ monsters characterတှေ ကို အသားပေးထားတာပါပဲ။ ကိုယျက human character တှကေို သိပျမကွိုကျတဲ့သူမို့လား မသိ။ ၂၀၁၄ Godzilla ရုပျရှငျတုနျးက human drama မြားပွီး monster characterနညျးတယျလို့ ဝဖေနျခံရတာကွောငျ့ ၂၀၁၉မှာတော့ ပွငျဆငျခဲ့ဟနျ တူပါတယျ။ ဒါရိုကျတာပွောငျးသှားတာလညျး ပါမှာပေါ့။
ဒါကွောငျ့ ဒီရုပျရှငျမှာတော့ Monstersတှေ အမြားကွီးကို visual effects ကောငျးကောငျးနဲ့ စိတျလှုပျရှားစရာကောငျးအောငျ သခြောရိုကျကူးထားပါတယျ။
အရငျ Godzilla ကားတှထေကျ ပိုပွီး အသကျဝငျတဲ့၊ ကွမျးကွုတျ ရကျစကျတဲ့ monsters တှကေို ရငျတမမနဲ့ ကွညျ့နရေမှာပါ။ ဒီကားမှာ human characterတှေ၊ သူတို့ကွားက drama နဲ့ ဇာတျအိမျပိုငျးကိုတော့ ခပျပေါ့ပေါ့ ဖျောပွထားတာလေးပဲ ပွောစရာရှိပါတယျ။ human drama နညျးတယျဆိုပမေဲ့ Titanတှေ အခငျြးခငျြး ကွားက Drama၊ Titansတှနေဲ့ သူတို့ကို သံယောဇဉျကွီးတဲ့ သိပ်ပံပညာရှငျတှကွေားက drama ကတော့ မနညျးပါဘူး။
နောကျတဈခုက သုံးထားတဲ့ technology နဲ့ ဇာတျဝငျတေးတှပေါ။ ဟငျခနဲ ဟာခနဲ ဖွဈသှားစတေဲ့အထိ အရမျးမိုကျတဲ့ underwater scenesတှပေါ ပါတယျ။
ကြောရိုးခိုငျတဲ့ ဇာတျလမျးမို့ ရုပျရှငျအရညျအသှေးကတော့ အစကနေ အဆုံးအထိ တဈစကျမှ လြော့သှားခွငျး မရှိပါဘူး။ သမားရိုးကြ သာမနျတိုကျပှဲတဈခု မဟုတျဘဲ ကမ်ဘာပျေါက လူသနျးပေါငျးမြားစှာရဲ့ အသကျကို လောငျးကွေးထပျထားတဲ့ တိုကျပှဲတဈခုမို့ အားမလို အားမရ ဖွဈမှုနဲ့ အတူ အနိုငျ အရှုံး ရလဒျတှကေို တခြိနျလုံး ရငျတထိတျထိတျနဲ့ ကွညျ့နရေမှာပါ။ ကွညျ့ဖူးသမြှ Godzilla ကား တှထေဲ ဒီတဈခုက ရငျအခုနျရဆုံးပါပဲ။ ဘာတှကေို ရငျခုနျရလဲ ဆကျပွောပွရငျ spoil မိ မှာစိုးလို့ မပွောတော့ဘူး 😁
ဒါကွောငျ့ Monsters တှကေို စိတျဝငျစားတဲ့ ယောငျးတို့အတှကျဆိုရငျတော့ Godzilla: King of the monsters ဟာ အခြိနျပေးလိုကျရတာ တနျတဲ့ ရုပျရှငျကားကောငျး တဈခု ဖွဈမှာပါလို့…
Tagged Fun, Godzilla, Movie, review
ကျိန်စာသင့်တယ်လို့ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ Poltergeist ရုပ်ရှင်
Posted on November 28, 2018 November 28, 2018 Author Aye Mon Kyaw
Park Seo Joon က “What’s wrong with Secretary Kim” အတွက် အသင့်တော်ဆုံးမင်းသား ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်း ၆ ချက်
Posted on July 25, 2018 Author Ei Mon
Park Seo Joon က “What’s Wrong With Secretary Kim” အတွက် အသင့်တော်ဆုံးမင်းသား ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်း ၆ ချက် လတ်တလောမှာရေပန်းစားနေတဲ့ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲလေးကWhat’s wrong with Secretary Kim ပါပဲ။ ဥစ္စာပေါရုပ်ချောပြီး ထက်မြက်သလောက် တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌနဲ့စမတ်ကျလှပပြီး သစ္စာရှိတဲ့ အတွင်းရေးမှူးမလေး ကင်မီဆိုတို့ရဲ့အချစ်ဇာတ်မြူးကားလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကိုရီးယားရုပ်သံtvNကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသနေတာ အပိုင်း ၁၂ ပိုင်းအထိရိုဆန်နေတုန်းပါပဲ။ ဒီကားကစစချင်းအပိုင်း(၁)နဲ့တင်ပရိသတ်တွေကိုဖမ်းစားလိုက်တာပါ။နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့အသည်းကျော် ParkSeoJoonမင်းသားကတည်ငြိမ်သူစတိုင်နဲ့ဟာသတွေဖန်တီးပြီးသရုပ်ဆောင်သွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဇာတ်ရုပ်နဲ့လိုက်တဲ့ကိုရီးယားမင်းသားကလည်းသူတစ်ယောက်တည်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ မာနကြီးပြီးအေးဆေးတည်ငြိမ်နေရာကအချစ်နဲ့လည်းတွေ့ရောပျာယာခတ်ပြီးရယ်စရာကောင်းသွားတဲ့ ဇာတ်ရုပ်ကိုအပီပြင်ဆုံးသရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့နေရာမှာ Park Seo Joon ကဆရာတစ်ဆူပါပဲ။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ မင်းသားဆိုတော့ အမွှန်းတင်ထားတာ :3 Park Seo Joonကိုလီယောင်ဂျွန်းဇာတ်ရုပ်အတွက် ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အကြောင်းရင်းက၆ချက်ရှိပါတယ်တဲ့။ ကိုယ်တွေရဲ့သတ်မှတ်ချက်နဲ့ဘယ်နှစ်ချက်လောက်ကိုက်ညီနေလဲကြည့်ကြည့်မယ်နော်…. ပထမတစ်ချက်ကအိုက်တင်အမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးသရုပ်ဆောင်နိုင်လို့ပါတဲ့။သူ့ကိုယ်သူချီးမွမ်းခန်းနေ့တိုင်းဖွင့်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်ကြီးနေတဲ့ပုံစံမျိုးသရုပ်ဆောင်ထားတဲ့အတွက် ပရိသတ်တွေစိတ်ထဲမှာ တကယ့်လီယောင်ဂျွန်းလိုမျိုး ဇာတ်လမ်းအဆုံးအထိ ခံစားပြီးကြည့်နိုင်အောင် အမူအရာအမျိုးမျိုးနဲ့ ဆွဲခေါ်သွားပါတယ်။ […]
ယောင်းအကြောက်ဆုံးအရာက ပြောပြနေတဲ့ ယောင်းအကြောင်း
လူတစ်ကိုယ် အကြိုက်တစ်မျိုးလိုပဲ လူတစ်ကိုယ် အကြောက်တစ်မျိုးစီလဲ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဒီအကြောက်တရားတွေက ယောင်းတို့ရဲ့ အတွင်းစိတ်၊ ယောင်းတို့အကြောင်းကို ပြောပြနေတယ်ဆို ယုံနိုင်ပါ့မလား….